Antalya တတိယအဆင့်ရထားလမ်းစနစ်အတွက်ပြင်ပမှငွေချေးခြင်းမရှိပါ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 AntalyaAntalya xnumx'üncအဆင့်ရထားစနစ်မှအဘယ်သူမျှမပြင်ပကြွေးမြီ
11 / 05 / 2019 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
ပြင်ပပေါ်မှာရထားလမ်းပေါ်တွင်ချေးကြဘူး Antalya ကြိမ်မြောက်ခြေလှမ်း
Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Muhittin အင်းဆက်ပိုးဟာမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကောင်စီသမ္မတအတွက်စုရုံးဆက်လက်မေလ 33 သာမန်ကောင်စီအတွက်အေးဂျင့်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ xnumx'üncဇာတ်စင်ရထားလမ်းလိုင်းများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက် Selahattin ကြေညာချက်, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု Artur ရဲ့ဦးစီးဌာန, မည်သည့်ပြင်ပငွေချေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းငွေလက်ခံပြေစာ။
; xnumx'üncဇာတ်စင်ရထားလမ်းလိုင်းများဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Selahattin Artur ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များအတွက်အပိုဆောင်းသင့်တော်ဆီလျော်အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့တိကျသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိကိုယ်စားကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း "ကအသုံးပြုခဲ့သည်အလင်းကိုရထားလမ်းသန်းချေးငွေ၏32018 xnumx'üncအဆင့်၌။ ဒါဟာ3သန်းတိုက်စားထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး 140 ယူရိုသန်းပေါ် မူတည်. ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအခြေစိုက်စခန်းအတွက်စုစုပေါင်း 87 ယူရိုသန်း။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန 77 10 သန်းငွေပေးချေမှုအချိန်ဇယားပြင်ဆင်နေအတူတကွတစ်နှစ်များအတွက်ဘတ်ဂျက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးအစီအစဉ်ကိုသူ CFCU များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးထံသို့ ဝင်. 2018 သည့်အခါ 561 နှစ်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသင့်လျော်သောများ၏အပြောင်းအရွှေ့အတွက်လိုအပ် 173 သန်းဘတ်ဂျက်ငွေစာရင်းစည်းမျဉ်းများပြင်ဆင်နေရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ကြ၏။ တစ်ဦးစရိတ်ခရက်ဒစ်မှသာဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဆင်သင့်ထားအပြင်ဘက်အနေအထားကပြောပါတယ်။ မရှိကြွေးမြီဖြစ်ပါတယ် "နှင့်သူမဆိုပြင်ပငွေချေးဆုံးဖြတ်ချက်များလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ (Antalyasonhab ဖြစ်ပါသည်)
Antalya BB ရထားလမ်းစနစ်နှင့်အဆင့် (၃) မီးရထားလမ်းစီမံကိန်း။
Antalya ဒုတိယအဆင့်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းရထားလမ်း ၁၈ စီးအားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း…
ရထားလမ်း firma ၀ ယ်ယူမှုအတွက် Antalya ဒုတိယအဆင့်မီးရထားစနစ်စီမံကိန်းတင်ဒါ
တင်ဒါကြေငြာချက် - Antalya ၏တတိယအဆင့်အတွက် Tram မော်တော်ယာဉ်ကို ၀ ယ်ယူမည်။
Antalya Metropolitan မြူနီစီပယ်မီးရထားလမ်းစနစ် II အဆင့်စီမံကိန်းş
Antalya မြူနီစီပယ်မီးရထားလမ်းစနစ် II ။ Phase Antray စီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Antalya ခြေလှမ်း2ရထားလမ်းကားတစ်စီးထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝအလုပ်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Antalya အဆင့်သုံးရထားလမ်းလိုင်းစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအကြံပေး…
Antalya တတိယအဆင့်မီးရထားစနစ်စီမံကိန်းစင်္ကြံလေ့လာခြင်း၊ ပဏာမနှင့်အပြီးသတ်စီမံကိန်းများ…
Antalya II Stage Square-Airport-Expo 2016 မီးရထားလမ်းလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ ...
Manisa တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်း Comfortable သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် Continues
Lancer သည်ယာဉ်အသွားအလာသင်တန်းပန်းခြံ Visited